Maxaan ka rajeyneynaa Xiaomi ee MWC 2019? | Androidsis
Waxaan nahay in ka yar laba toddobaad dhacdada caalamiga ah heer sare ee casriga casriga ah. Golaha Moobaylka Caalamka -MWC- wuxuu si dhakhso leh u bilaabi doonaa inuu noo keeno warar ku saabsan waaxda ficil ahaan dhammaan shirkadaha. Waxaa jira shirkado badan oo wax keydsada mid ka mid ah terminaalkooda si ay iftiinka ugu arkaan meel iyo taariikhi ah halkaasoo maalmo yar oo dhan nalalka adduunka ee teknolojiyaddu tilmaami doonaan.
Maanta waxaan eegeynaa Xiaomi, mid ka mid ah noocyada, sida ku dhowaad dhammaantood, sidoo kale ka joogi doona MWC. Iyo maxaa xigay sanad 2018 guulo kaamil ah Waxaan rajeyneynaa guulo waawayn sidoo kale sanadkan 2019. Wax yar ayaan ka ognahay waxa uu sanadkan ku soo bandhigi doono Shirka Caalamiga ah ee Moobilada, laakiin rajooyinka waa weyn yihiin. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha cusub ee suurtagalka ah ee ay nagula yaabi karaan.
1 Xiaomi wuu la yaabi karaa Pocophone F2
2 Qaab kale oo cusub oo suuragal ah wuxuu noqon karaa Mi A3
3 Xiaomi ayaa aad uga badan taleefannada casriga ah
3.1 Xiaomi TVs
4 Xiaomi ayaa soo saarta taas oo aan istaagin
Xiaomi wuu la yaabi karaa Pocophone F2
Shaki kuma jiro taas Pocophone F1 wuxuu ka mid ahaa taleefannada casriga ee sanadkii la soo dhaafay aad loo amaanay. Maaddaama soo saaraha Shiinaha uu caadaystay annaga, mid kale oo ka mid ah alaabteeda in tayada exudes waxayna leedahay a in ka badan qiimaha tartanka. Iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinka ay na siiso iyo qiimaha aan awoodnay inaan ku iibsanno, Pocophone wuxuu u yimid inuu ka dhigo kuwa soo saarayaasha kale ee aasaasiga ah inay ka xishoodaan kuwaasoo u maleeyay inay wax walba qabteen.
Saldhigyada labanlaabma qiimaha Pocophone F1 waxay leeyihiin astaamo kayar tan. Pocophone-ka waxaa loo caleemo saaray inuu yahay boqorka midka ugu-dhexaadka badan. Waa uun dhexdhexaad ah qiimaha, laakiin ma ahan faa'iidooyinka waxay bixisaa. Taasi waa sababta Xiaomi ay u leedahay guul la yaab leh oo aysan u joogsanaynin inay ku korto qalab kasta oo ay noo soo bandhigto. Iyo rajada aadka u kacaysa ee ah in deegaanka Xiaomi uu noqon karo midka ugu booqashada badan ee shirweynaha. Gaar ahaan haddii saadaasha qaar la fuliyo, sida mida aan kaaga sheegnay Pocophone F2.
Moodel ay aad u yartahay ka soo wareegtay. Nooca labaad ee Pocophone-ka ma fududa si loo ilaaliyo heerka uu gaadhay kii ka horeeyay sida ugu macquulsan. Way adag tahay in la hagaajiyo qalab wata astaamo tayo leh. Waxyaabaha caadiga ahi waa inay jidh ahaan ixtiraamaan khadadka nooca koowaad iyo inay la socdaan nooca cusub ee Android Pie. Waan jeclaan lahaa cusub Sanpdragon 845 processor oo ka bilaabi lahaa qiyaastii 6 GB RAM xasuusta. Xog yar xilligan, oo aan waxba caddayn, tani ma noqon doontaa layaabka Xiaomi?
Qaab kale oo cusub oo suuragal ah wuxuu noqon karaa Mi A3
Haddaan hadlayno dah Xiaomi Mi A2 Waxaan sidoo kale ka dhihi karnaa waxyaabo badan oo wanaagsan isaga. Ku dhowaad casriga casriga ah tan iyo markii la bilaabay iibiyayaasheeda ugu fiican bartamaha Android Iibiyaha kale ee ugu fiican Xiaomi. Way fududahay in laga helo 10-ka casriga ah ee ugu sareeya adoo fiirinaya sifooyinka ay bixiso.
Wax badan ayaa laga sheegay oo laga qoray Xiaomi Mi A3 cusub, waana wali nooc kale oo shirkadda ka mid ah oo abuuraya rajo markasta oo la magacaabay. Qaar badan ayaa tixgelinaya qaabkan mid ka mid ah kuwa suuragalka ah. Qalab in Ma fileynin illaa bisha Abriil, laakiin taasi waxay noqon kartaa xiddigga booska Xiaomi ee MWC.
Haddii imaatinka Mi A3 la xaqiijiyo bishaan Febraayo, sidoo kale waxay u badan tahay in lagu sameeyo gacanta xubin kale oo cusub oo qoyska ka tirsan, oo ah Xiaomi Mi 7X. Wax walba waxay muujinayaan in Mi A3 ee soo socda uu yeelan doono Processor Snapdragon 675. Ku shaqeyn doonaa nooca Android One wuxuu yeelan doonaa isku xirnaanta NFC.
Xiaomi ayaa aad uga badan taleefannada casriga ah
Sida aan ognahay, Qeybta casriga ee Xiaomi waa qeyb ka mid ah warshad taas oo aad uga badan. Marka lagu daro guusha adduunka oo dhan laga gaadhay soo saarista taleefannada gacanta, Xiaomi sidoo kale wuxuu ku guuleystaa adduunka oo dhan qalabkiisa guriga, qalabka yaryar iyo alaabooyin aad u tiro badan. Laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah waa macquul in midkood lagu soo bandhigo MWC 2019.
Mid ka mid ah "aaladaha" aadka loo wada sugayo ee dadweynaha guud ahaan wuxuu noqon doonaa Xiaomi TV. Haa, telefishinada ay soosaartay Xiaomi. Maaha wax cusub, oo hadda waxaa jira buug-yare u ballaaran sida uu u xiisaha badan yahay, sida dhammaan alaabtiisa oo dhan, qiimo aad u xiiso badan oo lagu daray astaamo tayo leh. WMC waxay noqon kartaa munaasabad ku habboon in lagu soo bandhigo telefishanka Xiaomi suuqa Yurub.
Ka dib guushii tijaabiye laser-kii ugu horreeyay ee Xiaomi la bilaabay sanadkii hore. Shirkada Shiinaha ayaa xoogaa sare u taagtay shaatigeeda. Qalab isku mid ah, mashruuc, kiiskan dheer-tuur badan oo aan ahayn mid gaar ah. Laakiin taasi waxay damaanad qaadeysaa heerarka tayada ugu yar iyo dabcan, qiime aad uga xiiso badan kan walaalkiis ka weyn.
Uma baranin inaan ka hadalno sheyga Xiaomi oo qiyaastii ah 2.000 oo euro, oo ah wax ku dhacay mishiinka leysarka. In kasta oo la arko qeexitaankiisa farsamo oo la isbarbar dhigo aalado isku mid ah haddana qaali maaha, waa laga fog yahay Bilowgii sanadkan waxaan awoodnay inaan kulanno nooc cusub oo ah mashruuca Xiaomi, sida aynu nidhaahno ka sii khushuucsan, ah Xiaomi Mi Projector Home Lite. Loogu talagalay in lagu qanciyo baahiyaha adeegsadayaasha goosgooska ah ee dhexdhexaadiyahan kuwaas oo aan dooneynin inay sameeyaan maalgashi ballaaran
Waxay u muuqataa in soo saaraha Shiinaha uu helay qayb ka mid ah suuqa maqalka, mid kale, halkaas oo aad ku dareemaysid raaxo. Waxay u badan tahay taas Xiaomi waxay soosaaraysaa moodallo cusub oo ah mashruucyo kaladuwan loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha kala duwan ee isticmaalayaasha suurtagalka ah. Shaki la'aan waa ikhtiyaar wanaagsan oo aad ugu raaxeysan karto waxyaabahayaga multimedia qaab gaar ah. Waana mid kale oo ka mid ah fursadaha aan ka heli karnay MWC ee sanadkan.
Xiaomi ayaa soo saarta taas oo aan istaagin
Waxaan ku qaadan karnaa maalintii oo dhan inaan ka hadalno waxa Xiaomi sameeyo. Laakiin kuwani waa badeecadaha aan aaminsanahay inay gaari karaan suuqa Yurub iyaga oo ka faa'iideysanaya MWC-da sannadkan ee Barcelona. Waxaan horey u ogaanay taas qoyska Xiaomi waa weyn yahay mana joojiyo koritaanka. Taasi waa sababta aan u ogaanay inay weli jiraan "dheriyo" badan oo guriga iman kara. Marka laga reebo taleefannada casriga ah waxaan ogaan karnaa qalabka yaryar sida kuwa kafee sameeya, nadiifiyeyaasha faakiyuumka ama bariiska,
Waxaan cadeynaynaa nafteena aad u jecel wax kasta oo Xiaomi sameeyo. Waxay kasbatay sumcaddeedii ugu fiicnayd iyada oo samaysa alaab wanaagsan oo qiimo wanaagsan leh. Y si dhakhso leh ayaan u awoodi doonnaa inaan ku ogaanno waxa ay nagula yaabi doonaan waqtigan marka la joogo 2019 World World Congress. Ma sugi karno intaas ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Maxaan ka rajeyneynaa Xiaomi ee MWC 2019?